Colombia Uhlu lwezinombolo Zocingo | Ukuthengisa Kuholela | Database lakamuva Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » EColombia Uhla lwezinombolo zocingo
Colombia Ucingo Izinombolo
Uhlu lwezinombolo zocingo eColombia luhla oluphezulu lokukhangisa ngocingo. Inkampani Yokugcina Ye-Mailing yedatha inikezela ngohlu oluphumelelayo lwemikhankaso yokuthumela izingcingo ngokuqondile, okuholwa ngabathengi okuholela. Uma ufuna ukuthuthukisa ibhizinisi lakho nge-SMS nohlelo lokubiza olubandayo kunokuthenga uhlu lwethu lwezinombolo zocingo oluvumelekile lwaseColombia.
Okungasetshenziswa ngokuqhathanisa nerejista Yokukhetha Izinombolo Zocingo ukususa ngokunembile noma yibaphi othintana abangafuni ukuthola izingcingo zokumaketha. Le datha izokuqinisekisa ukuthi ukhuluma nomuntu oxhumana naye okulungile futhi unciphise isikhathi sokuchitha kumakholi wokuthengisa ongakwazi ukuguqula. Sonke sinemininingwane eqinisekisiwe ngocingo ezinkulungwaneni zezinhlobo zemikhakha ongazibhekisa kumkhankaso wokukhangisa.
Thenga i-Colombia Consumer People Ucingo Ucingo
Izinombolo Zefoni Zonke: 400,000
Uhla lwefoni yaseColombia Consumer
Ukutholela isiza esifanele i-Colombia Consumer Ucingo Uhlu bese iDatabase Yeposi Lamathupha noma i-Latestdatabase.com ingakwenzela. Isayithi elinokwethenjwa kakhulu ekunikezeni izidingo zakho maqondana nohlu lwezinombolo zocingo lwabathengi oluwusizo olukhulu lokuthengisa izingcingo, ukumaketha kwe-sms kanye nokubiza okubandayo ukwaneliseka kwebhizinisi lakho.
Ukukhetha, uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi baseColumbia luyidatha eqinisekisiwe kunazo zonke ongayethemba ukuthola okusebenzayo kokuxhumana ngocingo nangendlela ephumelelayo yokukholisa iklayenti lakho ukuthi lithenge imikhiqizo yakho ngesifinyezo nje. Ukukunikeza imininingwane efanelekile evela kubasebenzi bethu bedijithali abanolwazi ukukwenza waneliseke.
Uhlu lwabathengi bezingcingo zabathengi baseColumbia noma uhlu lwezinombolo zeselula zabathengi abavela eDatabase nge-Mailing Database noma ku-database.com yakamuva iqukethe amarekhodi aphelele angama-400,000 ohlu lwefoni lwabathengi olufika ku- $ 600, ngesikweletu esikhokhelwa ngaso leso sikhathi kanye nesoftware engenziwa ngokushesha engaba ifomethi yefayela le-Excel CSV. Izindlela zokukhokha eziyikhadi le-visa, ikhadi le-master, i-PayPal, i-Skrill, inyunyana yasentshonalanga namakhadi amaningi namadivayisi wokukhokha kalula.
Ukuthenga, Uhla lwezinombolo zocingo lwabathengi baseColumbia kusuka kuDatha Yokugcina Ye-Mailing noma i-Latestdatabase.com, kuyindlela esebenzayo kunazo zonke ongayisebenzisa ebhizinisini lakho, noma ngabe kungokwentengiselwano, ukumaketha ngemiyalezo ye-sms kanye nemikhankaso yokubiza amakhaza ngokuba namakhasimende okuhlosiwe afanele akwenze ube ngaphezulu isebenza ngempumelelo yebhizinisi lakho.
EColombia Inombolo Yefoni Umbuzo & Impendulo